खानेपानीको नआए एप्सबाटै सुनाउनुहोस् गुनासो «
तपाईको धारामा तालिका अनुसार पानी आएन ? कतै पानी चहावटक भएको त छैन ? छ भने अब एप्सबाट खानेपानीसम्बन्धि यस्ता गुनासा सुनाउन सक्नुहुने छ । तपाईहरुकै गुनासालाई सम्बोधन गर्न बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले केयूकेल एप्सको उद्घाटन गरेको छ ।
केयुकेएलका अनुसार आफ्नो मोवालबाट केयूकेएल एप्स डाउनलोड गरेर पानी आए नआएको जानकारी दिन सकिने छ । उपभोक्ताको गुनासो बढ्दै गएपछि केयूकेएलले यस्तो एप्स ल्याएको हो । धारामा पानी आए नआएको र चुहावट भएको अवस्थाबारे जानकारी दिने र गुनासो सम्बोधन गर्नेगरी एप तयार गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को बाह्रौं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री मगरले केयुकेएलले गुनासो सम्बोधन गर्न विकास गरेको मोबाइल एप र रिजर्भवायर पानी ट्यांकीमा पानीको क्षमता मापन गर्ने प्रविधिको सार्वजनिक गरिएको बताएकी छिन् ।
केयूकेएलका प्रवक्ता मिलन शाक्य एप्स सञ्चालन भएपछि उपभोक्ताको खानेपानी सम्बनिध गुनासोको सम्बोधन हुने र चुवावटको समस्या नहुने बताएका छन् । “हामीले एप्सको सुरुवात गरेका छौं, अब उपभोक्ताले यही एप्स मार्फत् नै गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ ।” उनले भने, “उपभोक्ताका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न नै एप्स सञ्चालन गरेको छौं ।”
मन्त्री मगरले केयूकेएलले अझै मेहनत र सक्षमताका साथ काम गर्नुपर्ने समय आएको बताएकी छिन् । “उपत्यकाबासीले भोगिरहेका खानेपानीको समस्या हल गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) सक्षम भएर मेहनतका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ” उनले भनिन्, “काठमाडौं उपत्यकाबासीले वर्षौंदेखि झेलिरहेका समस्यालाई अब हल गर्नुपर्ने दिन नजिकिँदै गइरहेकाले केयूकेएल सक्षम बन्नुपर्छ ।”
मेलम्ची जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले केयूकेएलले चुस्त व्यवस्थापकीय ढंगबाट काम गर्नुपर्ने मन्त्री मगरले बताइन् । वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, “मेलम्चीको पानी आउन अब धेरै समय छैन । मेलम्चीको पानीको सही व्यवस्थापन गर्न केयूकेएल प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । केयूकेएलको कार्य क्षमताका विषयमा आम जनताले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।”
केयूकेएलको भूमिका र उद्देश्य निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री मगरले यस संस्थाको गरिमा बचाइ राख्न आग्रह गरिन् । उनले मन्त्रालयले केयूकेएललाई सक्षम र मजबुत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखिन् ।
मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले केयूकेएलको भूमिका बढ्दै गएको बताउँदै यसलाई अझै सुधार गरेर र क्षमता बढाएर अघि गरेर बढ्नुपर्ने बताए । सचिव बेल्बासेले पुरानो वितरण प्रणालीलाई नछोडी नै मेलम्चीको पानी पनि समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।